Itoobiya oo dacwad ka gudbisay Tigreega haysta ururka caafimaadka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Itoobiya oo dacwad ka gudbisay Tigreega haysta ururka caafimaadka
Dawlsada Itoobiya ayaa dacwad ka gudbisay Tigreega madaxda ka ah ururka caafimaadka aduunka. Tedros oo Tigree ah ayaa haba yaraatee wax caawimo la gaarin isbitaalada iyo jaamacadaha uu Tigreegu dhulka la simay gobolada Axmaarada iyo Canfarta.
”Wuxuu u istcimaalayaa xafiiskiisa sidii uu Itoobiya iyo jaarka iskaga hor keeni lahaa halkii ay ahayd inuu shaqadiisa u guto si sharafa oo dhexdhexaada ayaa lagu yiri qoraal ka soo ka soo baxay dawlada.
Itoobiya ayaa aqoonsiga kala noqotey ururkaas sidii Tigreega oo ay wataan gaalada kale ay weerar ku qaadeen gobolada Axmaarada iyo Canfarta.
”Tedros ayaa soo saari jirey warbixino sheegaya in Tigreega qaxay ay u baahan yihiin mucaawino degdega isagoo dadka qaxay ku tilmaami jirey 4 milyan halka aanu haba yaraatee ka hadal Axmaarada iyo Canfarta qaxday ayaa la raaciay qoraalka.
Dawlada Itoobiya yaa garaacday Tigreega kuna celisay gobolkooda ayadoo iska dhaftey ilaa hadda inay sii ceersato kana saarto gobolka mleeshiyada.